अन्तरबार्ता Archives - Page 8 of 8 - www.dthreeonline.com
फेला परिन् नेपालकै होची युवती, यस्तो छ उनको वास्तविकता, अवस्था र उचाई (भिडियो अन्तरवार्ता)
सृष्टि र नरेनको रोमान्स सहित सुनिलको ‘लाउरे’ प्रदर्शनको तयारीमा, हेर्नुस् (भिडियो सहित)
ईटहरी/ नेपाली सिने उद्योगमा स्थापित निर्माताको ट्याग पाएका सुनिल रावल 'सायद-२' को ब्यापारले सोचेजस्तो उपलब्धि नदिएपछि केहि समय मौन बसेका उनी अब फेरि जुर्मुराएर लाग्ने भएका छन् । होस्टेल, होस्टेल रिटर्न, सायद र सायद-२ जस्ता चलचित्रबाट अहिलेका स्थापित नायक नायिकाहरुलाई डेब्यु गराएका सुनिलले अब अर्को चलचित्र 'लाउरे' प्रदर्शनमा ल्याउने तयारी गरेका छन् । हामी संगको विशेष कुराकानिमा निर्माता सुनिलले यो ...
यिनै हुन् महिनामा ४ चोटि भ्याउने, के रैछ त्यस्तो ? भिडियोमा हेर्नुस् रमाईलो कुराकानी
बिराटनगर/ मोफसलमा रहेर पनि ब्यस्त मध्येका एक हुन् मोडल तथा निर्देशक प्रतिक श्रेष्ठ । मिडियाकर्म हुदै यता तिर ढल्किएका उनि बिराटनगरमा रहेर आफ्नो दुनियामा रमाई रहेका छन् । प्रोमोसनमा मज्जैले लाग्न नसके पनि उनि महिनामा ४ वटा सम्म म्यूजिक भिडियो गर्न भ्याईरहेको बताउँछन् । हेर्नुस् उनै प्रतिक संग गरिएको रमाईलो कुराकानी । कलाकारितालाई आफ्नो दैनिकि बनाउँदै आएका उनले अहिले नयाँ नेपाली म्यूजिक भिडियोलाई प...
नेपाल आईडल प्रतिष्पर्धी उल्सन केटीको प्रस्ताबमा के भन्छन ? हेर्नुस् रमाईलो कुराकानी
मंगलबार, पौष ११, २०७४
दुई रुपैयाँको ‘सुपारी दाना’ले ४ करोडको रेकर्ड, हेर्नुस् सुटिङ गर्दाको रमाईलो भिडियो सहित
ईटहरी/ नेपाली सिने र संगीत उद्योगमा पछिल्लो समय रेकर्ड बनाउने लहर निकै चलेको छ । यसको ज्वलन्त उदाहरण हो फिल्म '२ रुपैयाँ'को गीत 'कुटुमा कुटु' । यो गीत अहिले युट्युबमा नेपाली भिडियोहरु मध्ये सर्बाधिक हेरिएको भिडियोको ट्याग पाएको छ । लाखौ पटक हेरिएर पहिलो हैन करोडौं पटक हेरिएर पहिलो बनेको छ यो गीत । लोकलयमा तयार यो गीत तथा भिडियो देश तथा बिदेशका नेपालिहरु माझ निकै लोकप्रिय पनि छ ।पुर्वको मोरङ स्थित ...
गीतकार रोहित घिमिरे भन्छन्-‘पार्टिको भन्दा नेपालकै झण्डा प्यारो’
ईटहरी/ पछिल्लो समय नेपाली रंगिन दुनियाका केही हस्तिहरु राजनितीमा होमिन थालेको कुरा छर्लङ्ग छ । तर रंगिन दुनियामै भर्खरै पाईला चाल्न थालेका गीतकार रोहित घिमिरे भने आफू राजनितिमा नलाग्ने बताउछन् । हामी संग अनौपचारिक कुराकानीमा उनले यस्तो बताएका हुन् । धेरै सृजनाहरु लेखेका उनले आफ्नै सब्दमा गीतहरु पनि बजारमा सार्बजनिक गरिसकेका छन् । राजनिति गरेका राजनेताहरुले जे गर्नुपर्ने हो त्यो नगरेर त्यसको बिप...
शनिबार, पौष ०८, २०७४